Ny Loza Nanjo ireo Kongoley Voaroaka Tany Angolà · Global Voices teny Malagasy
Ny Loza Nanjo ireo Kongoley Voaroaka Tany Angolà
Voadika ny 16 Desambra 2018 7:47 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Italiano, Français
Araka ny fanambaràna nataon'ny Kaomisarià Ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona (OCHA), nanomboka tamin'ny fiantombohan'ny volana oktobra, olona eo amin'ny 330 000 eo ho eo tsy nanana taratasy ara-dalàna tao amin'ny fireneny no noroahan'ny Governemanta Angoley, indrindra indrindra mankany amin'ireo faritanin'i Kasaï afovoany sy Kwango ao amin'ny Repoblika demokratika an'i Kongo.
Nomarihan'ny fanambaràna fa taorian'ireo fifampiresahana tamin'ireo mponina ao an-tanàna manamorona an'i Kamako ao Kasaï, voaangon'ny Birao avokoa ireo vaovao mikasika ny fampiharana herisetra tafahoatra nataon'ireo mpitandro filaminana angoley nandritra ireo fandroahana ireo, ka nahafatesana sy naharatràna olona.
Nadine FULA manoratra ho an'ny vohikala oom-eco.net ary mitanisa ireo hevitr'i Michelle Bachelet, Kaomisera ambony ao amin'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona, manipika fa:
Ireo Kongoley noroahana avy any Angolà ireo dia nirohotra nankany amin'ireo faritanin'i Kasaï, Kasaï afovoany sy Kwango. Ary nandritra ireo resadresaka nifanaovana tamin'ireo mponina ao Kamako, naharay vaovao ny Birao misahana ny zon'olombelona ao amin'ny Firenena Mikambana hoe nampiasa herisetra tafahoatra ireo mpitandro filaminana angoley nandritra ny fandroahana ireo tsy olom-pirenena angoley tsy nanana taratasy ara-dalàna ireo.
362 097 no isan'ireo Kongoley voakasika tamin'izany tao anatin'ny tatitry ny OCHA momba ny repoblika demokratikan'i Kongo (RDC) niarahany niasa tamin'ireo mpiombonantoka eo amin'ny resaka maha olona, tao anatin'ny vanim-potoanan'ny 1 ka hatramin'ny 16 novambra 2018, saingy mampitandrina:
Nohamarinin'ny DGM [Direction Générale de Migration] ireo tarehimarika ireo, teo amin'ny sehatra nasionaly ary dia raisina ho isa voamarina. Na izany aza anefa, sahala amin'ireo antontanisa ofisialy rehetra ampiharana ny dingana fanamarinana, azo vinaniana fa tsy mbola maneho tanteraka ny habetsahan'ny fitomboana tanatin'ny vanimpotoana vao haingana ireo angona ireo.
Araka izany, ireo angona azo tamin'ireo rantsan'ny DGM teo an-toerana sy ireo avy amin'ny fikambanana sasany an'ny fiarahamonina sivily ary ONG, dia toa manondro isa iray tena betsaka amin'ny fahatongavan'ny olona any amin'ireo faritany sasantsasany. Io indrindra no zava-misy ho an'ireo angona azo avy amin'ny fomba fanarahamaso ny maha-olona tantanin'ny ONG Caritas ary mandrakotra manontolo an'ireo faritany iharany, izay anjara toerana fanairana sahaniny dia tsy maintsy raisina ho toy ny famenon'ireo isa voamarin'ny DGM. Amin'izao fotoana izao, io fomba fanarahamaso io dia mitatitra fa olona manakaiky ny 522 200 no haverina avy ao Angolà mankany amin'ireo faritany Kasaï, avy ao Kasaï Afovoany, Kwango, Kongo Afovoany, avy ao Lualaba sy Lomani, eo anelanelan'ny 1 oktobra sy 10 novambra 2018.
Niala tamim-pirotorotoana ny faritany Angoley, ny faran'izay tena kely indrindra no nentin'ireo olona ireo, na ihany koa nandositra niaraka tamin'ny tànam-polo. Amin'ny fitanisàna an'i Anna Praz, vehivavy mpitarika an'ireo hetsika CICR ao Kamako, manoratra ny vohikala fr.kongotimes.info hoe:
“Olona nandeha niaraka tamin'izay kely azony nentina ireo olona ireo, tsy nanam-potoana mba hiomanana akory, matetika tonga niaraka tamin'ny tànam-polo na niaraka tamin'izay fananana tena kely indrindra. Ary nandositra tamin-tahotra ny sasantsasany tamin'izy ireo.”, hoy ny nambaran'i Anna Praz, lehibe mpitarika an'ireo hetsika CICR ao Kamako. “Ary ankehitriny izy ireo dia tonga any aminà toerana iray izay tena maha-vahiny azy, satria fotoana elabe izy ireo no niaina lavitra an'i Kongo, ary amin'izy ireo, misy olona tsy mba nanana fifandraisana betsaka intsony tamin'ny fianakaviany tao anatin'ny taona vitsivitsy”, hoy izy nanampy.
Tao anatin'ny lahatsoratra navoaka tamin'ny 15 oktobra lasa teo, nampangain'ny vohikala lepotentielonline.net ireo fanitsakitsahana lozabe ny zon'olombelona nampiharina tamin'ireo olona ireo:
Ny ankamaroan'ireo mpiray tanindrazana ireo dia niharan'ny fitondra ratsy no sady voaendak'ireo miaramila angoley mialohan'ny nandroahana azy ireo sahala amin'ny biby. Mitranga avokoa izany kanefa tsy misy tomponandraikitra avy ao Kinshasa mba miloa-bava. Fanambaniana henjana, hatramin'ny naha-teo amin'ny faritany Kongoley azy ireo, mipetraka eny ankalamanjana avokoa ireo mpiray tanindrazana voaroka ireo, ao anatin'ny fahantrana tanteraka. Niaina fanambaniana ireo Kongoley an'arivony tao Angola, ary ao anaty helo eo amin'ny taniny, ao anaty tsy firaharahiana tanteraka ataon'i Kinshasa.
Araka ny voalazan'ny talen'ny Oxfam ao RDC, Chals Wontewe, tanisain'ny afrique.lalibre.be, ireo olona izay efa miady amin'ny fahantrana, ny hanohanana ary ny aretina indray no mbola nandray ny sasantsasany tamin'ireo olona voaroaka ireo:
“Nifanehatra tamin'ireo fianakaviana izay mampiantrano olona hatramin'ny telopolo isa avy any Angolà izahay, raha toa ireo zanany ao an-trano efa mijalin'ny tsy fahampian-tsakafo henjana”, hoy ny tatitr'io tomponandraikitra misahana ny maha-olona io.
Tsy ampy sakafo, mijalin'ny aretina isan-karazany ireo olona voaroaka ireo. Teo amin'ny afriquinfos.com, nanamarika i Vignikpo Akpéné fa tamin'ny datin'ny 23 oktobra, olona 15 fara-fahakeliny no matin'ny aretina raboka ary nanampy izy fa:
Ny tomponandraikitry ny hopitaly an'i Kamako, ao RDC, ny Dr Miko Mikobi nanipika tsara fa “vokatry ny tsy fahampian-tsakafo sy aretina avokoa no nahafaty ireo olona ireo, indrindra indrindra ny tioberkilozy”.
Io dokotera io dia nilaza ho nandray “marary 318, anisany tamin'ireo voaroaka izay ny ankamaroany dia voan'ny tioberkilozy avokoa”.
Na dia ireo angoley vadina Kongoley aza dia voaroaka na koa nanaraka ny vadin'izy ireo:
Ces angolaises, épouses des congolais expulsés d'Angola, suivent leurs maris à Kamako (Kasaï). Près de 200 000 congolais ont déjà quitté Lunda Norte. Les conditions d'accueil en RDC ne sont pas réunies, beaucoup passent nuit à la belle étoile avec femme et enfants. pic.twitter.com/zVf33ocw79
— ACTUALITE.CD (@actualitecd) October 15, 2018
Ireo Angoley ireo, vadin'ireo Kongoley voaroaka tao Angolà, dia manaraka ny vadin'izy ireo ao Kamako (Kasaï). Manakaiky ny 200 000 ireo kongoley efa nandao an'i Lunda Norte. Tsy mbola voaangona ireo fepetra fandraisana ao RDC, marobe ireo matory eny an-tokontany miaraka amin'ny vehivavy sy ny ankizy. pic.twitter.com/zVf33ocw79
Misy koa ny tranga mikasika an'ireo ankizy kongoley teraka tao Angolà izay tsy mahay miteny akory ny frantsay. Reny iray no namboraka tamin'ny slateafrique.com:
“Teraka tao Angolà avokoa ny zanakay ary tsy miresaka afa-tsy teny portiogyy”, hoy ny fitantaran'ny vehivavy iray efapolo taona izay nonina efa ho folo taona niaraka tamin'ny vadiny tao Lucapa, ao amin'ny faritany angoley Lunda Norte, araka ny lazainy.
“Tampoka teo, ny alatsinainy, nahita an'ireo zatovolahy avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Tchiokwé izahay niaraka tamin'ireo mpitandro ny filaminana angoley nanomboka nandoro ny tranon'ireo izay heverindry zareo fa vahiny. Nony tonga teto aminay, noratrain'izy ireo tamin'ny vy fikapoham-bato ny vadiko ary tsy maintsy niala niaraka tamin'izay azonay nentina izahay”, hoy ny fitantarany, ako tamin'ireo fijoroana vavolombelona hafa mikasika an'ireo herisetran'ny vondrom-piarahamonina izay milaza fisiana fahatesana mihitsy aza.
Raha ireo teratany kongoley no voakasik'ireo fandroahana tena faobe ireo, nandroaka afrikana hafa ihany koa i Angolà. Tahaka izay nosoratan'i Cheik Sidya teo amin'ny afrique.le360.ma, ao anatin'ny fotoana izay itadiavan'i Afrika fampiatiana, mampalahelo ny mahita hoe ao amin'io tanibe io no tena goavana ny fisian'ireo fandraofana sy fandroahana tena faobe.